यी Ritzy ब्यागहरू हेर्नुहोस् जुन सबैको ध्यान समात्दै छ। - प्रचलनहरू
यी Ritzy ब्यागहरू हेर्नुहोस् जुन सबैको ध्यान समात्दै छ।
शारीरिक फिटनेस को एक घटकको रूपमा शक्ति व्याख्या गर्नुहोस्
के यो आश्चर्यजनक छैन कसरी यो भारतीय लक्जरी ब्रांडले सबैको ध्यान समेटिरहेको छ? यो सकारात्मक रूपमा अन्य स्थानीयको तुलनामा 'स्थानीयका लागि भोकल' लाई अझ प्रभावकारी बनाउँदछ। मलाई 'ओसियाना क्लचहरू' प्रस्तुत गर्ने सम्मान गर्न दिनुहोस् जुन सबैको ग्रामलाई जाज गर्दैछ।
ओसियाना क्लचहरूले एक निर्विवाद प्रभावशाली उत्पादन पोर्टफोलियो प्रदान गर्दछ जुन टिकाऊ टोट्स, रिस्टलेट्स, स्लि bags ब्याग, राइन्स्टोन क्लच, साबर ब्याग, कन्फेटी क्लचहरू सम्म रहेको हुन्छ, तपाइँ यसलाई नाम दिनुहुन्छ र तिनीहरूले यसलाई बनाउँदछन्! यी झोलाहरूले भारतीय सेलिब्रेटीहरू र फेसन प्रभावकहरूले ठूलो ध्यान दिएका छन्। त्यसो भए अब कुनै थप adieu बिना यस मा डुबुल्की र को यो hype अँगालो छ जो प्रकट।
केवल एक शब्द - उल्लेखनीय। अमिरा दस्तुर बिल्कुल अस्थिर देखिन्थ्यो र दर्शकहरूको ध्यान यो क्लचको वरिपरि चरिरहेका थिए। यस क्लचको रंग योजनाले एकै समयमा पूर्णता र सूक्ष्मतालाई उत्सर्जित गर्‍यो। रीगल, हैन त?
सनी लियोनको मोनोक्रोमैटिक लुक प्यारा ब्ल्याक ब्यूटी क्लच बिना पूरा हुने थिएन। यो निर्दोष संयोजनले वास्तवमा टाउको पालो बनायो। सबै पछि तपाईं आफ्नो कोठरीमा त्यो निर्दोष कालो क्लच चाहनुहुन्न। कसलाई थाहा थियो यो क्लासिक रंग नयाँ ठाठ हो।
रिधिमा पंडितले उनको निजीकृत एस्ट्रेला भस्त्रलाई सबैभन्दा राम्रो गुलाबी पोशाकसँग हिलाइन्। उनको झोला भनेको के हो जुन म परम्परागत र आधुनिकको उत्तम संयोजन भन्छु। तपाईको आद्याक्षरको साथ त्यो झोला पट्टा को लागी मर्नु पर्छ। यो तपाइँको भारतीय पोशाकलाई कायाकल्प गर्ने उत्तम तरिका हो, के तपाइँ सहमत हुनुहुन्न?
मासुम मिनावाला मेहता
नेटफ्लिक्स कसलाई मन पर्दैन? र कृपया मलाई भन्नुहोस् यो कति रमाईलो छ यदि नेटफ्लिक्स तपाईंको पोशाकको पनि एक हिस्सा हो (स्पष्ट रूपमा शाब्दिक होइन)। मासुम मिनावाला बिल्कुल आश्चर्यजनक देखिन् जब उनको Oceana क्लच उनको ब्लेज़र कोर्डर्डको साथ पेयर गरिएको थियो। मलाई लाग्छ कि यसले उसको पोशाकमा उत्तम स्वाank्क थप्यो, हैन?
इशिता दत्त शेठ
इशिता दत्त निश्चय पनि यो पेस्टल भारतीय समूहमा देवीको रूपमा देखिन्थे। मेरो विचारमा, नीलो भस्त्रले उत्तम कन्ट्रास्टको रूपमा काम गर्‍यो र उनलाई वास्तवमै बाहिर उभ्यायो। यदि तपाईको भारतीय विवाह आउँदैछ भने, यो ब्यक्तिगत भष्ट्रा निश्चित रुपमा तपाईको विवाह सूचीमा हुनुपर्दछ।
अब तपाइँले निर्णय लिने समय आइसकेको छ, यदि तपाइँ तपाइँको पोशाकलाई पुरा नयाँ स्तरमा फेरी गर्न चाहानुहुन्छ भने, यो तपाईको रीच बैगहरूका साथ वरिपरि चिचि गर्ने तपाइँको संकेत हो।
यो पनि पढ्नुहोस्: लेस अप एडील्स लगाउने यो ठाँउपूर्ण तरिका तपाईंको ग्रामलाई चियाउँदैछ
कपाल विकास को लागी उत्तम उपचार
घरमा चम्किने छाला सल्लाहहरू
कसरी कपाल झर्ने नियन्त्रण गर्न